Suugaan yahanada Soomaaliyeed oo ka tacsiyadeeyay Geeriydii Abwaan Gaariye – SBC
Suugaan yahanada Soomaaliyeed oo ka tacsiyadeeyay Geeriydii Abwaan Gaariye
Fanaaniinta Soomaaliyeed iyo dhamaan inta ehelka u ah Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed ayaa tacsi u diray alaha u naxariitee Abwaan Maxamed Xaashi Dhamac (Gaariye) oo ahaa abwaan siweyn looga yaqaan geyiga Soomaaliya iyo dhamaan wadamada ay Soomaalidu ku badantahay.
Abwaan Maxamed Xaashi Dhamac (Gaariye) ayaa ku geeriyooday Habeen nimadii xalay Cariga dalka Norway ka dib xanuuno soo wajahay mudooyinkii ugu dambeeyay .
Abwaanka ayaa ka mid ahaa abwaanada Soomaaliyeed ee ku caansan Fanka afka Soomaaliga isagoona kaalimo aad u muuqaneysa ka qaatay xaaladihii kala duwanaa ee uu dalka Soomaaliya Soomaray isagoo ku cabirayay Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed.
Dhaman dadka ehelka u ah fanka Soomaaliyeed siiba fanaaniinta iminka fanka soomaaliyeed ku caanka ah ayaa udiray tacsi tiiraanyo leh dhamaan umada Soomaaliyeeed iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay Alaha u naxariistee Abwaan Maxamed Xaashi Dhamac (Gaariye)
Taariikhda Abwaanka oo Kooban
Marxuum Maxamed Xaashi Dhamac Gaarriye wuxuu ku dhashay Magaalada Hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed Soomaaliya balse iminka ah caasimada maamulka Soomaaliland taariikhdu marka ay aheyd1952dii.
Marxuumku waxa uu ku qaatay waxbarashadiisii dugsiga hoose, dhexe iyo sarereba Magaalooyinka Hargeysa iyo Sheekh intii u dhaxaysay 1960kii ilaa 1975kii, ka dibna wuxuu ku biiray Kulliyadda Lafoole ee Afgooye halkaas oo uu shahaadada BSC ka qaatay 1974.
Wuxuu bare ka noqday dugsiyo sare oo dhawr ah 1976,1977 waxaana loo bedelay Kulliyadda Lafoole oo uu ka dhigi jirey Suugaanta Soomaaliyeed. Muddo yar ka dibna waxa loo magacaabay guddoomiyahaWaaxda Suugaanta Soomaaliyeed ee Kulliyaddaas.
Waxa uu sannadkii 1973 helay miisaanka maansada Soomaaliyeed (taas oo ah qawaaniinta xukunta dhismaha maansada). Waxaana uu markii u horreysay si taxane ah ugu daabacay joornaalkii Xiddigta Oktoobar sannadkii 1976. Isla sannadkaas buu ku biiray Guddigii Af-Soomaaliga ee u xilsaarrayd erey-bixinta iyo cilmi-baadhista afka iyo suugaanta. Wuxuu wax ka qoray riwaayaddii Aqoon iyo Afgarad 1971.
Wuxu qoray Maxamed Xaashi Dhamac Gaarriye sannadkii 1979 riwaayadii Eed Hooyo laga Galay. Wuxuu ka mid ahaa abwaannadii ugu waawaynaa ee ka qayb galay silsiladdii caanka noqotay ee Siiley. Isagaana bilaabay silsiladdii xiisaha badnayd ee Deelley sannadkii 1979. Waxaana faan ugu filan inaanuu weligii gabay qabyaalad ah tirin.